SomaliTalk.com » War-Saxaafadeed Ra’iisul Wasaare Abdiweli: Xilliga Kala Guurka ah Waa Inuu Dhamaadaa 20ka August 2012
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Abdiweli Mohamed Ali oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Norway ayaa sheegay in Xilliga Kala Guurka ah uu ku egyahay August 2012 oo aysan jiri doonin muddo kororsi danbe.
06dii September 2011 ayaa Dowladda iyo maamulada dalka ka jira ay wada saxiixdeeen Roadmap kaas oo lahaa waqti mucayan ah iyo howlo muhiim ah. Arrimaha Roadmap ka diiradda lagu saaray ayaa kala ahaa Amniga, Dib-u-heshiisiinta & Is-gaaridda dowladda iyo maamulada, Dhameystirka Dastuurka, Dib-u-habeynta Baarlamaanka, iyo Maamul Wanaaga. Dhaqangelinta Roadmap ka waxaa laga qeybgeliyey bulshada qeybaheeda kala duwan oo 26 ilaa 28kii November Bulshada Rayidka ah loo qabtay shir wadatashi oo ka dhacay Muqdisho. Sidoo kale Shirarkii Arrimaha Dastuurka bilihii Diseembar iyo Febraayo ayaa waxaa ka soo qeygalay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo lagu qabtay Garowe, go’aanno muhiim u ah mustaqbalka dalkana ay ka soo baxeen.